Breaking News – ShweBo News
တန်ဖိုးရှိသည့် ပရိဘောဂများကို နေပူထဲ ထားခဲ့မိသည့်အတွက် သစ်ပင်မှာကြိုးနှင့်ချည်ပြီး အပြစ်ပေးခံရသော အစေခံမလေး
Saudi Arabia နိူင်ငံ Riyadah ပြည်နယ်မှာရှိသော ချမ်းသာသော မိသားစုတွင် အိမ်စေအဖြစ်လုပ်ဆောင်နေသူ ဖိလစ်ပိုင်နိူင်ငံသူသည် တန်ဖိုးရှိသော ပရိဘောဂများကို နေပူထဲမှာ ထားခဲ့မိသည့်အတွက်အလုပ်ရှင်က သစ်ပင်တွင် ကြိုးနျင့်ချည်ပြီး အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။ အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် Acosta Barue က‌ပြောကြားခဲ့သည်မှာ သူမသည် နေရောင်ကြောင့် ပျက်စီးနိူင်သည့် ပရိဘောဂတချို့ကို နေပူထားတွင် ထားခဲ့မိသည့်အတွက်သူမ၏အလုပ်ရှင်က စိတ်တို၍Rayadah ပြည်နယ်မှာရှိသော ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စံအိမ်ရဲ့ အလွန်ပူပြင်းတဲ့နေ‌ရောင်အောက်တွင် သစ်ပင်၌ ကြိုးနှင့်ချည်ကာ အပြစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပုံတွင်တွေ့ရတာကတော့ သူမသည် သစ်ပင်အောက်တွင် ကြိုးဖြင့် Read more
ပုံပါ သူတို့ နှစ်ဦးသည် …ကလေးကို ခဏထိန်းပေးမယ်ဆိုပြီ….း ခေါ်သွားတာ ၂ လပြည့်ပြီတဲ့
ပုံပါ သူတို့ နှစ်ဦးသည် …ကလေးကို ခဏထိန်းပေးမယ်ဆိုပြီ….း ခေါ်သွားတာ ၂ လပြည့်ပြီတဲ့ ရန် ကုန် တိုင်း ရန်ကင်း မိုးကောင်း ၁၂ ရက် ကွက် ကာ ယသုခလမ်း အိမ်အမှတ် ၆၀ နေ့. ဦးတင်လှ.ဒေါ်တင်ရီ သ မီး ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ နှင့် ဦးဇင်းသူရိယ ခေါ် ဦးဂျစ်တူး ပုံပါ သူတိုနှစ်ဦးသည် ၂၄. ၃. ၂၀ ၁၉ ရက်နေ့တွက် ကျမ အလုပ်သွားနေစဉ် ကျမ သမီးလေး Read more
မန္တလေးမြို့ တွင် ဓားကိုင်သောင်းကျန်းသူကို ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရ…
May 18 breaking news ယနေ့(မေ ၁၈) နံနက် ၄နာရီအချိန်ခန့်တွင် မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ၆၆ x ၁၄ လမ်းဒေါင့်၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်တွင် လမ်းသွားလမ်းလာများအား ဓားရှည်တစ်ချောင်ဖြင့် လိုက်လံခုတ်၍ ရန်ပြုနေသည့် အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကနဦးသတင်းသိရသည်။ ထိုသို့ ဓားကိုင်သောင်းကျန်းရန်ပြုနေကြောင်း ပြည်သူများမှ အကြောင်းကြားသဖြင့် နယ်မြေအတွင်း၌ လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေသော နယ်ထိန်းအရာရှိ နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အသိသက်သေအဖြစ် ဒေါနဘွားရပ်ကွက် အကွက်(၅၄)ရာအိမ်မှူးနှစ်ဦးနှင့် ဒေါနဘွားရပ်ကွက် ဒေသအရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ တပ်သားတစ်ဦးတို့ Read more
ဂျူဗင်တပ်အသင်းက နည်းပြ အယ်လီဂရီကို ထုတ်ပယ်ဖို့အတွက် သေချာသွားခဲ့ပြီ
ဂျူဗင်တပ်အသင်းအနေနဲ့ ၂၀၁၉၊၂၀၂၀ ရာသီမတိုင်ခင် နည်းပြ အယ်လီဂရီကို ထုတ်ပယ်မှာဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြ အယ်လီဂရီနီ အနေနဲ့ အသင်းကိုရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်း Serie A မှာတော့အောင်မြင်မှုတွေ ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ချန်ပီယံလိဒ်မှာတော့ ၊ အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးကွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုးရွားဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ယခုနှစ်မှာ Ajax အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရရှိအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြ အယ်လီဂရီနဲ့ အသင်းရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့တွေကတော့ မနက်ဖြန်နေ့လည် ၊ ၂ နာရီမှာပြုလုပ်မဲ့ ပွဲကြိုရှင်းလင်းပွဲမှာတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လီဂရီကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ၊ နည်းပြကွန်တီနေရာမှာအစားထိုးခဲ့ပေမယ့်လည်း လိုအပ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဒ် အောင်မြင်မှုကိုမရရှိခဲ့ပါဘူး။ နည်းပြ အယ်လီဂရီအနေနဲ့ Serie Read more
ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုနဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး
အီတလီ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Hippo 7th International English Olympiad ပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့သော မဆုစန္ဒီဆွေက ယခုလိုဆုရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့ပုံနဲ့ ခုလို ဝေမျှသွားခဲ့ပါတယ်။English စာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြိုင်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ အီတလီလည်း သွားရမယ်ဆိုတော့ ကောင်းသားပဲ ဆိုပြီး ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ စပြီးတော့ ပြိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ထဲက ဆရာမနဲ့ Test တွေ Example တွေ။ အရင်က မေးခွန်းပုံစံအဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ ဖြေပြီးတော့ လုပ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရောက်တော့လည်း Listening ကကျယ်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဆရာမကလည်း သေချာလေးပြန်စစ်ပေးတယ်။ Read more
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ရှိ မြို့နယ်များအတွက် နိူင်လွန်ကတ္တရာခင်းရန်အတွက် နိူင်လွန်ကတ္တရာခင်းစက်များဝယ်ယူ
မန္တလေးတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းပါ။ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• မြို့နယ်မြို့ တွေမှာပါ နိုင်လွန်ကတ္တရာလမ်းတွေ စခင်းတော့မှာပါ။ နိုင်လွန်လမ်းခင်းဖို့အတွက် နိုင်လွန်ကတ္တရာ ထုတ်လုပ်တဲ့စက် Asphalt Concrete Batching Plant လိုအပ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးလို့ မြို့နယ်တွေကို အလှည့်ကျ ပြောင်းရွှေ့လို့ရမယ့် Mobile batching plant ကိုဝယ်ယူလိုက်တာပါ။ နိုင်လွန်လမ်းခင်းရင်လိုအပ်တဲ့ Asphalt Paver,2Wheel Tandem Roller နဲ့9Wheel Pneumatic Roller တစ်စုံပါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ လောလောဆယ် ကျောက်ဆည်မှာ စခင်းပေးပြီးရင် Read more
မန္တလေး-မူဆယ်ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန် ဒေါ်လာ ၉ ဘီလျံကုန်ကျမည်
May, Myanmar မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတကာသို့မဟုတ်ဒေသတွင်းချိတ်ဆက်သည့် ရထားလမ်းပိုင်းဖြစ်လာမည့် မန္တေ လး-မူဆယ်ရထားလမ်းပိုင်းဖောက်လုပ်ရန်အတွက် ဖြစ်မြောက်နိုင်ခြေလေ့လာမှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိတွက်ချက်မှု အရ ကုန်ကျမည့်ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ဘီလျံခန့်ရှိကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ မီးရထားမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဘမြင့်က ပြောသည်။ မေ၁၃ရက်က နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပခဲ့သော ဝန်ကြီးဌာန၏တတိယနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၄င်းကပြောကြားသည်။ လက်ရှိတွင် ဖြစ်မြောက်နိ်ုင်ခြေလေ့လာမှုအကြမ်းပြီးစီးနေပြီဖြစ် ပြီး ရထားလမ်းပိုင်းအတွက် ရွေးချယ်စရာလေးခုရှိနေသည်။ ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင် ပူးတွဲတည်ဆောက်ရမည့်တံတားများ၊ ဖောက်လုပ်ရမည့်လှိုင်ခေါင်းများအားလုံးအတွ က် တစ်လမ်းမောင်းသို့မဟုတ်နှစ်လမ်းမောင်း မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မည်ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်လျက်ရှိသည်။ ”Single Line ကိုသုံးမယ်၊ Read more
May , 2019 မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်အစဖော်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟောင်လျံသည် မကြာခင်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍သုံးနှစ်တာ တာဝန်လာရောက်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သံအမတ်ကြီး မစ္စတာဟောင်လျံမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမခြောက်လအတွင်းမှာပင် တာဝန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားရန်စီစဉ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ကာ ထွက်ခွာမသွားမီကာလများအတွင်း သံတမန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်အပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့်အခြားသောထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများကို သွားရောက်တွေ့ ဆုံမှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်းလည်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်အား မေလ(၇)ရက်က Read more
Visitors today : 16,256
Page views today : 49,115
Total visitors : 98,057
Total page view: 250,177